नेपाल आज | १७ वर्षे सन्दिप लामिछानेले नयाँ इतिहास रचे, खेलको सर्वत्र प्रशंसा
१७ वर्षे सन्दिप लामिछानेले नयाँ इतिहास रचे, खेलको सर्वत्र प्रशंसा
नरेन्द्र मोदी देखि डा. भट्टराईले समेत खुलेर प्रशंसा गरे
काठमाडौं । सर्वाधिक दर्शकले हेर्ने क्रिकेट प्रतिष्पर्धा भनी चिनिएको आईपिएलमा नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछानेको प्रदर्शनको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ । १७ वर्षीय सन्दिपले पहिलो खेलमै गरेको बलिङ उत्कृष्ट भनी टिप्पणी हुन थालेको हो ।
पहिलो खेलमै एक विकेट लिएका उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । यद्यपि गएरातिको खेलमा उनी खेलेको टीम दिल्ली डेयर डेभिल्सले हारेको थियो । छनोटमा परे पनि उनी शनिबार राति भएको ब्याङलोरविरुद्धको खेलमा मात्रै मैदानमा उत्रिएका हुन् ।
यस क्रममा उनले विराट कोहेली र विश्व चर्चित ब्याट्सम्यान दक्षिण अफ्रिकाका एबीडी भिलियर्सविरुद्ध बलिङ गरेका थिए । सन्दिपको आकर्षक बलिङ भए पनि उनको टोली ५ विकेटले पराजित बनेको छ ।
यद्यपि सन्दिपको उक्त प्रदर्शनलाई लिएर धेरैले खुसी व्यक्त गरेका छन् । विश्व चर्चित खेलाडी तथा कमेन्टेटर देखि नेपालका क्रिकेटरहरुले पनि सन्दिपको खेलको प्रशंसा गरे । पारस खड्का, शरद भेष्वाकर लगायत खेलाडीले सन्पिदलाई शुभकामना दिँदै खेलको प्रशंसा पनि गरेका थिए । साथै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उनको खेलको प्रशंसा गर्दै उनको खेलबाट आफूहरु खुसी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
यसअघि शनिबार दिउसो नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उनको प्रशंसा गरेका थिए । नेपाली क्रिकेटरले यो स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने र विकेट लिने सन्दिप पहिलो खेलाडी हुन् । नयाँ इतिहास रचेको भन्दै सामाजिक संजालमा पनि उनको सर्वात्र प्रशंसा भएको छ ।
सन्दिप लामिछाने क्रिकेट अाइपिएल